September 24, 2020 Xuseen 31
Xogihii ugu dambeeyey ee aannu ka helayno deegaanka Tuakraq ee gobolka Sool ayaa waxaa ay sheegayaan inay halkaasi ay ka taagan tahay xiisad dagaal oo u dhaxeeysa Ciidamada Puntland iyo kuwa Soomaaliland.
Xiisaddaan dagaal ayaa bilaabatay kadib markii maamulka Somaliland uu ciidamo farabadan oo wata gaadiidka dagaalka soo dhoobay deegaamadaasi, waxaana ciidankaasi xoojinayaan boqolaal askar ah oo horay deegaankaasi ugu sugnaa.
Maalin ka hor ayaa waxaa degaanka tukaraq gaaray Abaan-duulaha Ciidamada Somaliland Sarreeye guutto Cabdirisaaq Siciid Bulllaale,waxana uu ciidamada u sheegay inay u diyaar garoobaan iska difaacitaanka wax uu ugu yeeray cadawga Soomaaliland.
Ciidanka Somaliland oo ku gaashaaman gaadiidka dagaalka ataa waxa ay dhaqdhaqaaqyo ka wadaan deegaanka Tukaraq, waxana xusid mudan in Ciidamo ka tirsan kuwa Puntland ay iyana ku sugan yihiin banaanka degaanka Tukaraq.
War illeen Iidoor xoog is biday derisnimo ma xeeriyo!
Hartoow dhidibka rida waa intood Dhimanba weysaane! Kkk
Qaniimada walllaaahi waa soo dhowaatay. Dagaal doon ma aha ee maadaama lagu mashquulsanyahay Xamar iyo doorasho waa anna waa ikan. KKKKK Waa attention doon.
Laakiin waxaan maqli jiray “ceesaantii mas iyo goodle malaggeedii baa galay” waxaa la gaaray xilligii general moorgan laga hor wareegi lahaa habraha mirqaansan ha aroosee KKKKKKKKKKKKKKKK
Waar Jaamac ma raggii dhashay 1991 wixii ka dambeeyey baa, horta Illaahay ha innaga badbaadiyo dagaal dad Somali ah dhallinyaro ah lagu laayo, waxba soo kordhin maayo, waxaanse la yaabay Jaamac ninka sheegtay oo soo qaatay magaca jeneraalka wixii Somali soo maray jeneraalo ugu fulaysanaa ugu aqoon liitay xagga hoggaaminta dagaalka, wuxuu ahaa Body Guard , Siyaad Barre hor orda, kumanaan ciidan ma dagaal galin karo, waa aqoon gaar ah, waa wixii uu Hargeysa uga cararay markii lasoo galay oo loo bixiyey magacii orod yahankii :ABDI BILE”, inta Harti leeyahay Jeneraalo ama gaashaanla Sare, maxaad uso qaadatay kii ugu liitay, halkee Iidoor wax ku yeelay, intii nabadda dad waa afduubi jiray oo layn jiray shacab ah , taasi oo fulaynimo iyo baqdin ka keenaysay, Maxaa looga bedelay Qaybtii 26aad ayaamo ka bacdi markii dagaalku qarxay, Kismanyo muxuu kaga sameeyey Barre Hiiraale. Nin Carab ah ayaa arkay nin aad u madow oo loogu yeedhayo ‘ Nuurow’ markaasuu yidhi ” Haddii Nuurkiinu kan yahay, madowgiinu waa ceynkee” Haddii Geesigiinu , dagaal yahankiinu, Abaanduulihiinu Moorgan yahay, Fulaygiinu waa ceynkee. Malah Jama waa reerkii yaraa ee Adarahmiin ee Moorgan ka soo jeedo
Dhudhun iyo nin kaa Dheer ma jiro Dhamac rasaaseede!
Dhaqaalana rag baa kuu Dhagoo waadna Dheragteene!
Hartoow Dhidibka rida waa intood Dimanba weysaane! good copy of A.Dhuux.Adan. Kkk
Tukaraq waa jiidda hore ee labada ciidan isku horfadhiyaan laakiin ragga jabhadda sheeganaya oo ku doodaya inay Somaliland dalka ka xoraynayaan maxay Tukaraq kasoo dooneen? Haddii ay Somaliland la dagaallamayaan may kula dagaallamaan Laascaanood iyo ubucda dhulka ay joogto? Mise taageero shacab ma haystaan? Mise waxay doonayaan intay wax tuurtuuraan in markii lasoo cayrsado ay xagga Garowe usoo cararaan?
Nimanka jabhadaha sheegta waxaan u sheegi lahaa haddii dadkiinnu dareensan yahay inay ixtilaal (occupation) ku jiraan oo ay diyaar u yihiin inay dagaallamaan, dhulkooda lama haysteen 13 sano. Marka, haddii aanu jirin dareenka caynkaas ah oo aydnaan taageero shacbi haysan, ha is-halligana, dadkiinnana dhib ha usoo jiidina. Qaddiyaddiinnii iyo mustaqbalkiinnii waxaa gatay siyaasiin iyo isimmo aan aragti iyo mabda’ lahayn oo jecel inay ka qaraabtaan saddex-xagalka Hargeysa – Garowe – Muqdisho.
Markey bilabato ayeyku walanayan xamar ayanaso weerarty ama somalia ,balse waxan kayavanahy rerka dhulkaas leh ama degan sida damirku uga dhintay wayo karayan aya agtooda dhoban jadana wey usacabo tumayan iyago og iney gumeysi rer lamid ah kujiraan ayey 24ka dadki darabka u aha meel walba aflagadadooda wadaan waxna iska celin mayaan inlaga celiyona may ogola!!
Su’aal isku mid ah ayaan weeydiiyey labo nin oo Iidoor ah oo kala da’ ah, kala waddanna joogo oo kala jifo ah.
Ninka hore wuxuu ahaa nin 30 jir ah, oo ah qoloda la yiraahdo Habar-jeclo, waqtiguna wuxuu ahaa, 2,005tii.
Ninka labaadna wuxuu ahaa, Habar-Yoonis, da’diisuna waxaay ahayd, 60 jir, waqtiguna waa, 2015kii.
Su’aasha aan weeydiiyey waxaay ahayd.
Maxaad faleeysaan haddii aad Iidoor tihiin, haddii aay idin yiraahdaan nimanka Harti ee deggan Sool iyo Sanaag annagu in aan Soomaaliya ka go’no dooni meeynee, orda oo adinka Go’a kaligiin!
Labadii nin waxaay i siiyeen, jawaab aan u fahmay in aay qabaan 95% dadka Iidoorka ah!
Taas oo ahayd, dee Dhulku waa Somaliland ee ciddii aanan dooneyn in aay Somaliland nimo ku qanacdo ha ka guurto Dee!!!!
Ninka mijaha dhuudhuuban ee Soomaaliga ah, waa dulmiilowga aanan oggoleyn in saacad isaga la dulmiyo!!!!!
kkkk @A.A.Xade hadee idoor wagaashle ma ayakaa dhulba heysta ay sheegtaan kkkk kkkk. waa laga dhul badan yahay oo waana laga dad badan yahay kkkkk waana sababtay hubkaas u miciinsanayaan kkkkk kkkkk. duulkaan dhul waa laga habaarey waana waxay sodon sano ugu howlanaayeen inay dadka kale dhulkooda boobaan kkkkk kkkkk. yuhuuday dabeecada iyo dhaqanka wadaagaan duf ku baxooyin kkkkk.
Nin afgumeed ku hadla ayaa rag ugu liita, Majeerteen sida islaamaha haw hadlaan eley rag iskama celinkaraane. “ Intii habar Majeerteen iyo halawash naagaaleh”
Belo ma jirto,wax xiisad dagaal ahna ma muuqato,keliya waxan u jeedaa ciidan jooga dalkiisa,fulinayana waajibaadkiisa.
Cidii SAS ka qabta waa arin u taal.
Cadowgaasu waa argagixisada Puntland usoo waaridi rabto Sool,waana laga hortagayaa,xuduudkana laga xidhanayaa waliba.
Argagixisadii waa naga soo firxadeen kkkk
Maliishiyada ay abaabulayaan haday tuurtuur dambe sameeyaan jawaabta Somaliland Puntland ayaa qaadaysa,mana Ku meeraysanayso maliishiyo Garoowe laga soo abaabulay.
Belo waa layska moosaa,Somaliya oo Puntland Ku jirtaana waxa kaga iman kara Somaliland amni darro,argagixiso waaridid,mana la aqbali karo.
Taangiyadii C/caziz Cali Barre Gaalkacayo ku dhaafay Puntland xagee geyday?
Iidoor miyay ka gadeen,waakuwaan Ku cabsi gelinaya taangiyo duq ahee?
Waa ogaa in Iidoor Garoowe soo dul fariisanayaan mudo kadib,wuxuna rabay inay isku daafacan.
Beder & uxud baa yaabay.
Anigu waa ogaa in Jeneral C/Caziz Cali Barre ka qaybqaatay dib u xorayntii Gaalkacyo 1991 laakiin ma maqal taangiyo uu uga tegay, wayse dhici kartaa.
Waxaase jiray ilaa 10 taangi oo reer Mudug haysteen oo lagu difaaci jirey Gaalkacyo, kuwaas oo ahaa kuwii Caydiid u diiday inuu mar dambe xoog kusoo haweysto Gaalkacyo. Nasiibdarro, markii UNISOM timid Somalia 1993 ayaa waxaa suuqa lasoo galiyey in Somalia oo dhan hub-ka-dhigis lagu sameyn doono. Waxaa igu maqaale ah in berigaas reer Mudug taangiyadii kala furfureen oo sidaas looga takhallusay. Tallaabo ay ku degdegeen ayey ahayd.
Taawgii aan maqli jirey inay Caabudwaaq iyo Balanballe oolli jireen weli ma yaallaan?
Waxaan joogay maalintii Abdiaziiz Ali Barre ka baxay Woqooyi magaalada Wadaamo Gooye ee Laamigu maro, hal Taangi lama bixin, wuxuu la badany Beebeeyo (ABC), waxay halkaa kaga tageen Xaajiyadda ka qallibantay, Cabdicasiis markuu baxayey tuulooyinka uu marayey ma xabbadayn, marki uu Hargeisa iyo Burco joogayna cid shacab ah ma layn jirin, isaga iyo Ina Cumar jees, waxaa dadka layn jiray shicibka; Moorgan iyo Gaanni.
Iiiiidooor duqon maha….iiiidoor iyo isirkii nugaal ama barri uma soo dhawaan karaan….dhulbahante dhulkoodii wey xaraashteen..
Ahmed kaarshe says:
@ xirsi doofaararay cabdicasiis kuma dhaafine adoo dabamadow ayaan barqadii kaa daadsaday marka Buena fuulfuulka iyo iskhaafinta jooji
@ xirsi doofaararay cabdicasiis taangiyo kuma dhaafine adoo dabamadow ayaan barqadii kaa daadsaday marka Buura fuulfuulka iyo iskhaafinta jooji
@ cm in argagixiso la isku sabootgareeyo shaqada soomaaliland bay ahayd marka haday puntland fahmilayd arrintaas way wanaagsanaan lahayd
Ciidan Puntland yeelato waxay Ku xirantahay in beelaha hubka laga uruuriyo,laguna wareejiyo ciidanka,maadama ayaguna difaacaan beelaha iyo degaanada Puntland.
Ma aqaan sababta,laakiin kalsooni daro beelaha ah ayaa jidha iskaba daa Harti.
Ciidan beeleed Gaalkacayo taangiyo Ku difaaca,doorkii ciidankana qaata ayaa jidha..
Cayda jooji,caadina iska dhig ma nihin haween oo caytan lagu ogaaye
Mida kale xagee dabadayda Ku aragtay ma naag ila seexataa tahay?
Kuwaas meel Ku dambeeyeen ma ogi,laga yaabaa ajnebigii 1993 dalka joogey (UNISOM)Itoobiya siiyeen.
Marka Reer Mudug xukuman Pudland ayaa taangiyada la arkaa baan filayaa….
Binti- Girl , dagaaal ma rabo niiko ayay ku jirtaaa , Xamar & baydhabo ayay ka niikinaysaa futda weyn luxaysaa, markaa iyadu ma rabto dagaal umana jeedo. Tukaraq mar hore ayaa lagu kale baxay. waxaa degan Ciidanka qaranka Somaliland, niman laabta xidido ku leh. markaa haday Binti-girl leedahay Gorowe dagaal ha ka dhaco oo la biliqasto iyada ayay u taalaa..
Binti-Girl. .. Dagaal maad rabtaa , Yes or No.. looma baahna Niiko & Brobogaandho raqiis ah.
Binti-Girl.. Ord Xamar & baydhabo ka niiiki adigoo Futo weyn, dagaalku waa wax aad u xun qax & dhibaato leh iska dhaaf.. waan kuu digayaa
Hubka iyo Taangiyada Mudug Yaalla qolalka lagagama sheekeeyo waanay yaallaan wax la fur-furayna ma jiraan. Laakiin waxaan shaki ku jirin in Taangiyada lagu galay dagaalkii koowaad ee adduunka ee beesha isaaq soo rinjiyaysay inaanu waxba u tari doonin. Laga soo billaabo, lafaruug oo jilib Ogaadeen ihi Berbera geeyay, Sayid Mohamed oo ay Gaalada ku daba safnaayeen oo hambada askarta ingiriiska cuni jireen, iyo caqli xumadii ay 1988 ay dumarka iyo carruurta iska soo hormariyeen oo ay dharbaaxaddii dowladdu dhulkoodii khasaaraha gaarsiisay, marka Reerkaa yari markay in yar nadab ku noolaadaanba qori dable ayay la ordaan waana reerka soomaali ugu cabaadka badan ee xabaalo qufka ku caan baxay. Waxna iskama celiyaan marka la faraxumeeyana soddonka sano ee soosocota xabaala qodis iyo waa nala xasuuqay bay meelahaa kaga dawarsan doonaan.
Marka waa hadakii xajaaj binu yuusuf ee ahaa : waxaan arkaa madax bislaatay oo waqtigii xiiritaankeedu soo dhowaaday!!!
JAAMAC BEENTII MAJERTEEN IYO FAANKII BAAD WADDAA, SOMALI WAA LA TIRIYEY, WAXA TIRIYEY 10 URUR OO CAALAMI AH, WAXAY SO SAAREEN WARBIXINTA, XATAA PUNTLAND POST LAGU DAABACAY, WAXAY U KALA BADAN TAHAY SIDAN, AMA DIID AMA YEEL AMA FAAN AMA DHUUS
.2 MDG report for Somalia. UNDP, 2007
4 Population estimates and projections for Somalia 2005–2009. Nairobi, UNDP Somalia, 2005
5 OCHA 2009
6 World Bank 2007
7 Post Gu Analysis. Technical series report no. VI.24, Nairobi, Food Security and Nutrition Analysis Unit, 2009
Hirsi… been muu sheegin cidna muu caayin. waa runtii , Taangiyada waxaa lahaa marka horeba l dawlada Soomaliya iidoorku ka mid yahay. arinka wanaagsan farxada leh waxa uu yahay Binti-Girl Taangiyadii way soo qaaday Ciidanka qaranka Somaliland ayay hadiyad ugu wareejisay, meeshaa wax dhib ah kuma jiraan. Taangiyada waxaa looga difaacayaa xuduudaha cadowga Somaliland. qof Soomaali ah shicib ah aan waxba galabsan waxba yeeli maayan .
Ma filayo nin Xirsi yahay qolada aad moodday, mana filayo inuu hadalkiisa ula jeeday inuu ku xumeeyo reer Puntland. Anigu waxaan u fahmay canaan iyo guubaabo.
Soomaali waxba uma kala qarsoona. Wixii 30 sano kahor dhacayna sir ma aha ee waa taariikh cid walba ogtahay.
Inta aan ka ogahay arrinta Taangiyada Gaalkacyo.
Markii aay USC qabsaneeysay ma jirin wax Taangiyo ah oo ku jiray gacanta reer Puntlanf, marka laga reebo dhawr xabbo oo aay haaysteen, reer Goldogob.
Taangiyadii ugu badnaa ee Qeybta 21aad waxaay yaaleen, Balanbal iyo Cabuud-Waaq. Laakiin Mareexaanku ma haaysan dhaqaalo aay ku dayac tiraan.
Waxaa jirtay in aay Beesha Majeerteen isugu tagay Magaalada Garoowe si looga arrinsado qaabkii maalada lagu xureyn lahaa!
Waxaa la gartay in uusan gacanta reer Puntland ku jirin hub culus oo loogaga hortago hubka faraha badan ee USCda.
Laakiin waxaa la tilmaamay in aay hub faro badan haaysato beesha Mareexaan, laakiin aanan loo diri karin ergo Majeerteen ah oo ku qancisa in aay ka qeyb qaataan, xureynta magaalada.
Waxaa lagu wada qancay in Mareexaan loo diro, ergo ah beesha Dashiishe. Taas oo ku guuleeysatay in aay Sade ku qanciso ka qeybgalka dagaal, halka reer Puntland aay bixiyeen, Shidaal, Raashin iyo dayactir wixii loo baahnaa.
Mareexaan Magaalada wuxuu kaga yimid dhanka Dhuusa-mareeb, reer Puntland dhanka Garoowe.
Xureyntii magaalada waxaa lagu qabtay, 3 illaa 4 Taangi oo aay wadatay USC.
Waxaa dhactay arrin laga fiicnaa oo dhex martay Jeneran C/siis C. Barre iyo Allaha u naxariistee, C/risaaq X. Xuseen.
Taas oo arrintii aay ku sigatay in aay isku dhacaan, beelaha Mareexaan iyo Majeerteen. Wixii labada Oday dhex maray ku dheeraan maayo.
Ugu dambeyn beesha Mareexaan markii aay rabeen in aay deegaankoodii u noqdaan ayaa waxaa laga codsaday in aay Magaalaga qaar u reebaan, ku dhuwaad 20 Taangi oo gacantoodu ku jiray oo aay kamid yihiin kuwii la gala haray USC.
Taas oo aay sameeyeen oo aay magaaladii u reebeen illa 10 Taangi oo aay intooda badan u dhiibeen Leelkase. Some of The Real History of that event!!
We love china, China are always welcome to Puntland Somalia.
Yuusf Dheere says:
“ Inaan Isaaq Majeerteen la simo igama eegtaani; Daarood qasweyn leh baan lahaa xaglaha googooyey.
Waxay Xumaatey Xaajado markey Majeerteen habla doon ahi soo degeen Caasimadii weyneydeh”.
Asc dhamaan. Puntland wa in ayey ka baxda gudaha somaliland. Hadii kale wa dagaal.